Matoanteny - Wikipedia
Ny matoanteny dia teny (sokajin-teny) izay ampiasaina ao amin'ny fehezanteny na fehezankevitra mba hilazana asa na toetra na fifandraisana na fisehoan-javatra ka mety miovaova endrika (maneho fotoana, fiendrika (na fitodika), filaza, fanehoan-javatra sns. arakaraka ny fiteny), nefa misy koa ny fiteny tsy manova ny endriky ny matoanteny mihitsy. Ny isan'ireo antom-piovan'endriky ny matoanteny ireo dia miovaova araka ny fiteny. Mety hifandray amin'ny endriky ny teny mifandray aminy mivantana izany fiovan'endriky ny matoanteny izany ka isan'izany ny maha tokana na maro na ny maha kandahy na kambavy ny mpandray anjara (lazaina, fameno, sns), sns. Ireto misy matoanteny amin'ny fiteny malagasy: mihinana, mandehana, nifampijerena, sns. Ny tarika foronin'ny matoanteny sy ny teny na andian-teny mameno azy sady tsy azo foanana no atao hoe "tarika matoanteny".
1 Ny endrika ara-pitsipitenin'ny matoanteny
1.1 Endrika mifandray amin'ny asa na ny toetra tondroiny
1.1.1 Ny filaza
1.1.2 Ny fanehoan-javatra
1.1.3 Ny filazam-potoana
1.1.4 Ny fiendrika
1.2 Endrika misy ifandraisana amin'ny mpandray anjara
1.2.1 Fifandraisana amin'ny laharan'ny mpandray anjara
1.2.2 Fifandraisana amin'ny isan'ny mpandray anjara
1.2.3 Fifandraisana amin'ny kilahivavin'ny mpandray anjara
2 Fiteny manana matoanteny tsy miova endrika
Ny endrika ara-pitsipitenin'ny matoantenyHanova
Endrika mifandray amin'ny asa na ny toetra tondroinyHanova
Ny filaza dia toetra ara-pitsipiteny izay maneho ny fomba fihevitry ny mpiteny momba ny votoatin'ny zavatra lazainy (asa na toetra) ka mety ho filazana fisiana marina na ahiahy na fahafahana mitranga izany. Ny fiteny malagasy dia ahitana ny filaza tsotra sy ny filaza mandidy.
Ohatra, tsy mitovy endrika ny matoanteny malagasy manapaka sy manapaha satria tsy mitovy filaza: ny voalohany amin'ny filaza tsotra fa ny faharoa amin'ny filaza mandidy.
Ireto koa ny filaza sasany mety ho hita amin'ny fiteny hafa: ny filaza ifampiankinana sy ny filaza mihonohono (na mifampiankina) ary ny filaza mirary. Amin'ny voambolan'ny fitsipiteny eorôpeana dia isaina ho filaza koa ny endri-matoanteny toy ny endrika tsy mitanisa sy ny ova-matoanteny ary ny filaza toe-javatra.
Ny fanehoan-javatra na faneho dia toetra ara-pitsipiteny izay ahafahan'ny mpiteny maneho ny fomba fijeriny manoloana ny fivoaran'ny ny asa na ny toetra resahina (fanombohany, fizotrany, fahavitany sns) ao amin'ny matoanteny na ny teny rehetra mety hatao entimilaza. Ny mariky ny filazam-potoana amin'ny fiteny sasany dia mariky ny fanehoan-javatra ihany koa ka mahatonga ireo fiteny ireo hoatry ny manana filazam-potoana maro dia maro.
Ohatra, tsy mitovy endrika ny matoanteny malagasy mitapaka sy voatapaka satria tsy mitovy fanehoan-javatra: ny voalohany amin'ny fanehoan-javatra tsy efa fa ny faharoa amin'ny fanehoan-javatra efa.
Ireto ny karazana fanehoan-javatra fahita matetika amin'ny fiteny maro: ny fanehoan-javatra efa, ny fanehoan-javatra mitohy, ny fanehoan-javatra mifintina ary ny fanehoan-javatra mifetra sy ny mifanohitra amin'ireo.
Ny filazam-potoana dia toetra ara-pitsipiteny izay manampy amin'ny fahafantarana ny fotoana nisehoan'ny asa na ny toetra amin'ny alalan'ny fiovan'endrika, ka izany fotoana izany dia mety ho ny iray amin'ireto telo ireto: ankehitriny sy lasa ary hoavy. Tsy ny fiteny rehetra no manana fomba ara-pitsipiteny hilazany fotoana, ary amin'izay manana izany dia ao ireo tsy mizara afa-tsy fotoana roa (lasa vs tsy lasa, hoavy vs tsy hoavy), ary ao ireo mizara izany mihoatra ny telo.
Ohatra, tsy mitovy endrika ny matoanteny malagasy manapaka sy nanapaka ary hanapaka satria tsy mitovy filazam-potoana: ny voalohany amin'ny filazam-potoana ankehitriny, ny faharoa amin'ny filazam-potoana lasa ary ny fahatelo amin'ny filazam-potoana hoavy.
Ny fiendrika na fitodika dia toetra ara-pitsipiteny izay hita taratra amin'ny fiovan'endrik'ilay teny sy ny heviny ka mampitodika io teny io amin'ny lazaina. Ny fiendrika na fitodika fantatra indrindra ao amin'ny fiteny maro dia ny fiendrika mañano sy ny fiendrika anoina. Arakaraka ny mpahay teny no anavahana na tsia ny atao hoe fitodika sy ny hoe fiendrika.
Ohatra, tsy mitovy endrika ny matoanteny malagasy manapaka sy notapahina ary anapahana satria tsy mitovy fiendrika: ny voalohany amin'ny fiendrika manano, ny faharoa amin'ny fiendrika anoina ary ny fahatelo amin'ny fiendrika ananovana.
Endrika misy ifandraisana amin'ny mpandray anjaraHanova
Ny mpandray anjara ao amin'ny fehezanteny dia mety hitana ny anjara asa lazaina na iray amin'ny anjara asa fameno.
Fifandraisana amin'ny laharan'ny mpandray anjaraHanova
Ny endriky ny matoanteny amin'ny fiteny sasany dia miovaova arakaraka ny laharan'ny mpandray anjara ka matetika dia ny mpandray anjara misahana ny anjara asa lazaina izany nefa koa mety ho ny iray na maro amin'ireo mpandray anjara mitana ny anjara asa fameno: laharana voalohany na faharoa na fahatelo.
Amin'ny fiteny frantsay dia miovaova arakaraka ny laharana na ny vondron-daharana ara-pitsipitenin'ny lazaina ny endriky ny matoanteny, indrindra eo amin'ny fanoratana. Ohatra ny matoanteny hoe croire ("mino"): nous croyons ("mino izahay/isika"), vous croyez ("mino ianareo"), ils/elles croient ("mino izy (ireo)").
Fifandraisana amin'ny isan'ny mpandray anjaraHanova
Ny endriky ny matoanteny amin'ny fiteny sasany koa dia miovaova arakaraka ny filaza isan'ny mpandray anjara isan'anjara asa ka matetika dia ny mpandray anjara misahana ny anjara asa lazaina izany nefa koa mety ho ny iray na maro amin'ireo mpandray anjara mitana ny anjara asa fameno: endrika milaza tokana na endrika milaza maro sns.
Amin'ny fiteny frantsay dia miovaova arakaraka ny isan'ny mpandray anjara lazaina ny endriky ny matoanteny, indrindra eo amin'ny fanoratana. Ohatra amin'ny matoanteny hoe croire ("mino"), ampitahao ny je crois ("mino aho") sy ny nous croyons ("mino izahay/isika"); ny tu crois ("mino ianao") sy ny vous croyez ("mino ianareo"); ny il/elle croit ("mino izy") sy ny ils/elles croient ("mino izy (ireo)").
Fifandraisana amin'ny kilahivavin'ny mpandray anjaraHanova
Ny endriky ny matoanteny amin'ny fiteny sasany dia miovaova arakaraka ny kilahivavin'ny ny mpandray anjara ka matetika dia ny mpandray anjara misahana ny anjara asa lazaina izany nefa koa mety ho ny iray na maro amin'ireo mpandray anjara mitana ny anjara asa fameno: kandahy na kambavy sns.
Amin'ny fiteny frantsay dia miovaova arakaraka ny kilahivavin'ny mpandray anjara lazaina na faneno ny ova-matoanteny lasa amin'ny tranga sasany, indrindra eo amin'ny fanoratana.
Le garçon s'est assis devant moi. ("Nipetraka teo anoloako ilay zazalahy": mifandray amin'ny lazaina: kandahy)
La fille s'est assise devant moi. ("Nipetraka teo anoloako ilay zazavavy": mifandray amin'ny lazaina: kambavy)
Les informations que j'ai transmises ... ("Ny vaovao nampitaiko ...": mifandray amin'ny fameno: kambavy)
Le message que j'ai transmis... ("Ny hafatra nampitaiko ...": mifandray amin'ny fameno: kandahy)
Fiteny manana matoanteny tsy miova endrikaHanova
Misy fiteny maro izay tsy manavaka ny matoanteny sy ny anarana ka ny anjara asa am-pehezanteny no manan-danja kokoa noho ny fanasokajiana ny teny. Ireto avy ireo fiteny ireo: fiteny ao Azia-Atsinanana: ny fiteny mandarina, ny fiteny vietnamiana, ny fiteny taý, ny fiteny monda; fiteny ao Afrika: ny fiteny oôlôfo.
Ny fiteny anglisy koa dia mikisaka mankany amin'ny fampitovian'endrika ny anarana sy ny matoanteny. Ohatra: water ("rano") vs water ("mameno rano"), pen ("penina") vs pen ("manoratra amin'ny penina"), baby ("zazamena") vs baby ("mikarakara zazamena") sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Matoanteny&oldid=1012376"
Dernière modification le 15 Jiona 2021, à 03:15
Voaova farany tamin'ny 15 Jiona 2021 amin'ny 03:15 ity pejy ity.